Translate Myanmar (Burmese) to Nepali | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Nepali, Myanmar (Burmese) to Nepali translations, Myanmar (Burmese) to Nepali Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား नमस्कार, तिमी कसरी हो
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? त्यहाँ कोही छ?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ म तिमीलाई साँच्चै माया गर्छु
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, यो हैम्बर्गरको मूल्य कति हुन्छ?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? के तपाईं मलाई ट्याक्सीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး म दु: खी छु
တဆိတ်လောက် मलाईं माफ गर्नुहोस्
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို मलाई रुचि छ
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ मेरो उडान ढिलाइ भयो
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို म यहाँ व्यवसायको लागि छु
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် नमस्कार मेरो नाम हो
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို मलाई माफ गर्नुहोला, तर म विवाहित हुँ
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? के तपाईं मलाई हवाईअड्डामा लिन सक्नुहुन्छ?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ कृपया समय कस्तो छ?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? नजिकैको प्रहरी स्टेशन कहाँ छ?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? के म तपाईंको फोन चार्जर कृपया उधार लिन सक्छु?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? कृपया मलाई पेय आदेश दिनुहोस्।
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? यो कति खर्च गर्छ?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး म ग्लुटनमा एलर्जी हुँ
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော त्यहाँ डाक्टर छ?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? के मैले कल गर्न सक्छु?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ मलाई तपाईंको मालिकलाई फोन गर्नुहोस्।
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် यो ठाउँ धेरै राम्रो छ
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ कृपया मलाई होटलमा लिनुहोस्
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? मेरो कोठा नम्बर के हो?